Waa maxay istaraatiijiyada silsiladda qiimaha iyo tilmaamaha qaarkood | Dhaqaalaha
Waa maxay istiraatiijiyada silsiladda qiimaha?
Iyada oo tiro intaa le'eg oo shirkado iyo ganacsiyo caalami ah ay maanta ka shaqeeyaan, tartanku wuxuu noqday mid aad iyo aad u adag oo ka adag marka loo eego waqti kasta oo kale. Si kastaba ha noqotee, tani caqabad kuma ahan in aan la bilaabin oo la dhisin ganacsiyo cusub oo raadsanaya meel ka mid ah baahida isticmaalka ee dadweynaha adduunka.
Marka la eego, mid ka mid ah fikradaha ugu muhiimsan ee ay tahay in lagu maareeyo fulinta mashruuc kasta oo ganacsi ah waa waxa loo yaqaan Silsiladda qiimaha.
1 Maxay tahay silsiladda qiimaha?
2 Sidee silsiladda qiimaha ugu shaqaysaa hawlgalka shirkadda?
3 Sidee ayaa faa'iidada tartanka ee hal shirkad looga abuuray mid kale?
3.1 Waxqabadyada qiimeeya
3.2 Hawlaha aasaasiga ah
3.3 Hawlaha taageerida ama heerka labaad
4 Talooyin si guul leh loogu dabaqo silsiladda qiimaha
Maxay tahay silsiladda qiimaha?
Silsiladda qiimaha waxay ka kooban tahay qalab nooc istiraatiiji ah oo loo adeegsado in lagu barto waxqabadyada kala duwan ee ay fuliyaan ayna fuliyaan urur ganacsi oo gaar ahl, tan si isha ay u leedahay faa iidada tartan loo ogaan karo iyo sidan, si loogu awoodo in lagu soo saaro qiimo cayiman badeecada ugu dambeysa.
Sidan oo kale, waxaan ka heli karnaa taas Silsiladda qiimaha shirkaddu waxay ka kooban tahay dhammaan waxqabadyadeeda la soo saaray taas oo keenaysa qiimo dheeraad ah.ama, iyo sidoo kale xadadka ay howlahaasi ku biirin karaan. Isku soo wada duuboo, silsiladda qiimaha waxay ka kooban tahay howlaha istiraatiijiyadeed ee doonaya inay kordhiyaan qiimaha iyo faa'iidada tartan ee urur ganacsi.
Sidee silsiladda qiimaha ugu shaqaysaa hawlgalka shirkadda?
Qiimaha ka dhasha nashaadaadyada ganacsigu waxay u shaqeeyaan sidan soo socotaMarka laga hadlayo warshadaha wax soo saarka, waxay soo saaraan qiimo marka ay alaabada ceyriinka ah u beddelaan alaab lagama maarmaan u ah dadweynaha.
Dabcan, qiimaha lagu daray wuxuu horeyba ugujiraa badeecada ugu dambeysa ee lasoosaaray, maadaama alaabada ceyriinka ceyriin aysan waxtar u laheyn dadka isticmaalkooda maalinlaha ah.
Sababtaas awgeed, shirkadda tafaariiqda tafaariiqda waxay bixisaa tiro badan oo badeecooyin ah oo ka kooban qiime sare oo lagu daray maadaama horeyba loo baaraandegay, qiime sii kordhaya iyadoo alaabtan oo dhan la siinayo macmiilka hal meel ah, meel ay bixiyeen aasaasid iib si dadku u helaan wax kasta oo ay u baahan yihiin, taas oo keenaysa kharash dheeraad ah oo sidoo kale ah qiime dheeri ah oo alaabada ugu dambeysa ah, taas oo macmiilku ku dhamaan doono lacag bixinta si uu u sii wado helitaanka baahiyahooda aasaasiga ah ee isticmaalka, iyada oo loo marayo maqaallo horeba la socodsiiyay iyo hal goob iib ah.
Sidee ayaa faa'iidada tartanka ee hal shirkad looga abuuray mid kale?
Faa'iidada tartan ee hal shirkad oo xiriir la leh shirkad kale ayaa la soo saaraa markii midkood uu maareeyo kordhinta dhinaceeda, taas oo lagu gaari karo iyada oo la yareeyo kharashka, ama sidoo kale kordhinta iibka. Marginku waa waxa looyaqaano faraqa udhaxeeya qiimaha guud iyo qiimaha wadajirka ah ee fulinta iyo fulinta howlaha qiimaha ee shirkad ganacsi.
Si ay u fuliso shaqadeeda, Silsiladda qiimaha waxay leedahay nashaadaadyo aasaasi ah oo taageero ah, kuwaas oo loo qaybin karo laba qaybood oo waaweyn: Hawlaha aasaasiga ah iyo waxqabadyada dugsiga sare. Marka xigta, waxaan daawaneynaa astaamaha ugu muhiimsan ee mid kasta oo ka mid ah hababkan istiraatiijiyadeed uu soo uruuriyo ee kordhiya faa'iidada tartanka, iyo sida oo kale, qiimaha shirkadeed.
Hawlaha aasaasiga ahi waxay ka kooban yihiin qaababka abuurista muuqaalka ah ee badeecadaha, iyo sidoo kale habka iibkooda iyo adeegga iibka ka dib ee hawlgalkani u baahan yahay.. Waxaa xusid mudan in kuwan, marka la eego, loo kala saari karo waxqabadyada hoose. Guud ahaan, qaabka silsiladda qiimaha, shan nooc oo ah howlaha aasaasiga ah ayaa si cad loo kala duwanaan karaa, kuwaas oo ah kuwa soo socda:
Saadka gudaha: Kani waa hawlgallada soo dhaweynta, keydinta iyo qaybinta alaabta ceyriinka ah, taas oo aad muhiim u ah in la hubiyo in dib u dhacyada ama astaamaha nooc kasta oo ay yihiin aan la soo saarin oo saameeya soo saarista ama qaybinta qayb kasta oo ganacsi.
Hawlgallada: Marka alaabta ceeriin ee loo baahan yahay la helo, waxqabadkani wuxuu loola jeedaa awoodda wax-qabad ee walxahan si loogu beddelo badeecada ugu dambeysa. Sidaa darteed, waa tallaabo aasaasi ah oo lagu hubinayo wax soo saarka ay hay'addu yeelan doonto.
Saadka dibedda: Haddii saadka gudaha loola jeedo dhaqdhaqaaqyada si loo hubiyo lahaanshaha iyo iskuduwaha alaabta ceyriinka ah ee lagu soo saaray badeecada ugu dambeysa, saadka dibedda, dhanka kale, waa inuu ku sameeyaa isla qaabkan, laakiin lagu dabaqay habab dibadeed, taasi waa, markii badeecadu ka baxdo xarunta wax soo saarka oo loo geeyo jumladleyda, qaybiyeyaasha ama xitaa si loo joojiyo macaamiisha.
Suuqgeynta iyo iibinta: Hawshan, sida magaceedu tilmaami karo, waxay muhiim u tahay wax soo saarka si loogu ogeysiiyo dadka macaamiisha ah.
Adeeg: Waxqabadkani wuxuu la xiriiri karaa labadaba adeegga iibka kadib iyo wax kasta oo la xiriira macluumaadka iyo dayactirka oo ay ku jiri karaan iibsashada wax soo saar. Waxay ku saabsan tahay hubinta daacadnimada macaamiisha iyada oo la siinayo shey horeyba gacmahooda ugu jiray dammaanad qaas ah oo muhiim ah, sida hubinta soo noqoshada haddii ay waxyeello soo gaarto ama cilladaha, ama bixinta talobixin ka dhan ah wax kasta oo dhaca sida ku guuldareysiga bixinta ama taageerada rakibi sheyga, iwm Dhammaan dammaanad-qaadyadan waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo lana xoojiyo qiimaha ugu dambeeya ee badeecada, taas oo markaa si weyn u ilaalinaysa heerka qanacsanaanta macaamiisha.
Hawlaha taageerida ama heerka labaad
Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado si howlaha aasaasiga ah loogu fuliyo si hufan oo habsami leh, in iyaguna ay taageerayaan waxa loogu yeero waxqabadyada labaad ee silsiladda qiimaha. Nidaamyadan waxaa loo fuliyaa sida soo socota:
Kaabayaasha ururka: Waxay ka kooban tahay dhammaan howlahaas kuwa bixiya joogtaynta iyo kuwa ilaaliya howlaha aasaasiga ah ee shirkad kasta, taasi waa, howlaha sida qorsheynta, xisaabinta, maamulka iyo dhaqaalaha.
Maareynta shaqaalaha: Sida magaceedaba ka muuqata, waxqabadkan taageerada ahi wuxuu ku saabsan yahay dayactirka iyo ilaalinta shaqaalaha, taas oo ah, waxay ka kooban tahay raadinta, shaqaalaynta iyo dhiirigelinta shaqaalaha shaqaalaha ka shaqeeya shirkadda. Waa muhiim in la tixgeliyo cunsurkan, maaddaama ilaha aadanaha ee shirkaddu ay yihiin mid ka mid ah qaab-dhismeedkeeda aasaasiga ah taas oo qeexi karta guusheeda muddada-dheer.
Horumarinta tikniyoolajiyadda, cilmi baarista iyo horumarka: Shirkad kasta inay ku sii wadato ku shaqeynta waxtarka ugu weyn isla markaana siisa alaabada ugu fiican uguna casrisan dhammaan macaamiisheeda, horumarka tikniyoolajiyadda ayaa muhiim u ah inay safka hore kaga jirto kala duwanaanta wax soo saarka iyo / ama adeegyada ay bixiso, ugu dambeyntiina, waxay had iyo jeer ku siiso sawir tayo leh oo aad markasta kaga sooci karto kuwa kula tartamaya.
Iibsasho: Cunsurradan waxay ku xiran tahay awoodda loo leeyahay inay soo saarto iibsiyada ugu waxtarka badan uguna faa'iido badan shirkadda. Asal ahaan, waxay ku saabsan tahay sida loo maareeyo geeddi-socodka iibsiga mashiinnada, qaybaha, xayeysiinta loogu talagalay dhiirrigelinta shirkadda ama adeegyada loo isticmaalo in lagu ilaaliyo niyadda shaqaalaha, iyo sidoo kale shaqadeeda ugu habboon.
Talooyin si guul leh loogu dabaqo silsiladda qiimaha
Golaha 1: Maaddaama silsiladda qiimaha ee shirkad ganacsi ay tahay inay ka tarjunto xeeladaha ganacsi ee la hirgeliyay, marka la go'aaminayo sida loo hagaajinayo silsiladda qiimaha la yiri, waa inay iska caddaataa astaamaha wanaagsan ee ka duwan tartamayaasha, ama dhinaca kale, waxaad sare u qaadi kartaa qiimaha hoose qaabdhismeed.
Golaha 2: Markii aad la kulanto liistooyin badan oo isbeddello ah oo lagu hirgelinayo casriyeynta shirkadda, waxaa aad muhiim u ah in mudnaanta la siiyo oo diiradda la saaro isbadaladaas kuwa ah kuwa sida ugu wanaagsan u saameyn doona macmiilka.
Golaha 3: Waxaa lagugula talinayaa inaad si faahfaahsan ugu milicsato mid kasta oo ka mid ah walxaha ka kooban silsiladda qiimaha, labadaba go'aaminta waxqabadyadooda asaasiga ah iyo howlaha waxqabadka. Sidan oo kale, waxaad ku heli kartaa cunsurro wax u qaban kara si liidata oo leh awood ballaaran oo horumarineed, taas oo aakhirka ku dambayn doonta kordhinta faa'iidada tartanka ee shirkadda oo dhan.
Golaha 4: Silsiladda qiimaha waxaa lagu go'aamiyaa ugu horreyn iyadoo la raacayo falanqaynta gudaha ee shirkadda, sababtaas awgeed ayaa lagula talinayaa, waxtarka weyn, in lagu sameeyo daraasado ku saabsan duruufaha dibedda ee saamaynta ku yeelan kara qiimaha iyo faa'iidada ganacsi ee ganacsiga.
Sida lagu arkay maqaalkan, aqoonta silsiladda qiimaha runti waxay faa'iido u yeelan kartaa in si weyn loo kordhiyo qiimaha lagu daray iyo faa'iidada tartan ee urur ganacsi. Iyadoo lagu xisaabtamayo xogtan, go'aanno fiican ayaa la gaari karaa si loo fuliyo waxqabad kasta oo aan ujeedkiisu ahayn oo keliya aasaasidda, laakiin sidoo kale ilaalinta iyo horumarinta nooc kasta oo ganacsi ama shirkad ah. Sababtaas awgeed, aad ayey muhiim u tahay in la fahmo oo si wax ku ool ah loo adeegsado silsiladda qiimaha ee dhammaan dadaallada nooca ganacsiga ah, maadaama ay saldhig u noqonayso adkeynta shirkadeena ama ganacsigeenna lagu sii jiri doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Waa maxay istiraatiijiyada silsiladda qiimaha?